ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ White ကရေစိုခံတာပေါ်လင် မှအရည်အသွေးမြင့် White ကရေစိုခံတာပေါ်လင် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့် Poly ယက်ထည်လိပ်နှင့်အိတ်များထောက်ပံ့ White ကရေစိုခံတာပေါ်လင်*, Kraft စက္ကူ PP ယက်ထည်နှင့် HDPE ယက်ထည်အိတ် laminated ။ ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင်ရက် လုပ်၍ ထုတ်လုပ်သည် Taiwan.
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းတွင်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ပိုမိုအားဖြည့်ကုသမှုများအပြင်အခြားအရွယ်အစားများ၊ အလေးချိန်နှင့်ရက်ကန်းသိပ်သည်းဆများပါ ၀ င်သည်။
PP / PE ယက်ထည်ပစ္စည်းများကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးတိုင်းကိုသေချာစေပြီးအချိန်မီဖြန့်ဝေသည်။
ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်သင်လိုအပ်လျှင်၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောစက်မှုစွမ်းအား PP ကိုထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်/PE ယက်ထည်.မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သော PP PP ယက်ထည်လိပ်များအားထောက်ပံ့ရန်စူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည် PP ယက်ထည်၏သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/white-waterproof-tarpaulin.html
အကောင်းဆုံး White ကရေစိုခံတာပေါ်လင် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် White ကရေစိုခံတာပေါ်လင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ